Hab-dhaqanka ciidanka Farmaajo oo laga deyrinayo | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweyne Farmaajo ayaa ciidan u diray Gobol ay ku badan yihiin reerka uu ka dhashay, Haddaba waa sidee hab-dhaqanka ciidanka Farmaajo u wakiishay in ay gacanta kusoo dhigaan gobolka Gedo? si uu doorashada ugu soo laabto mar kale.
BALAD-XAAWO, Soomaaliya - Ayaan darrida ugu weyn waxay ku dhacday umadda Soomaaliyeed oo xalay ilaa maanta wiilashooda labda dhinacba isku dilay magaalo yar oo kutaal Koonfurta Soomaaliya, Balad-xaawo waxaa ku sugan oo gacanta ku haya ciidamo laga daabulay gobolka Benaadir, loona diray si ay u xaqiijiyaan amniga magaaladaasi.
Ciidamo milatari iyo Nabad-sugid isugu jira ayaa gaaray March 2020 magaalada Balad-xaawo, waxaa laga saaray kuwii horay u joogay, meel fogna ma jirine magaalada duleedkeeda ayey dhoobnaayeen, xalay ayey weerar ku qaadeen si ay u qabsadaan, 02:30 ayey la wareegeen, waaberigii saakay ayaa dib loogala wareegay iyadoo ciidamadii xalay qabsaday 100 kamida ay dowladda Soomaaliya soo bandhigtay.
Waxaa lagu baahinayay baraha bulshada muuqaallo laga naxo, taasoo askari Soomaaliyeed uu xabadka dhulka udhigay ciidamadii la qabtay ee kasoo horjeeday, kaddibna uu ku garaacayo qori, isagoo waalidkii dhalay askarta caaynaya! Hab-dhaqanka ciidamada loo diray in ay qabtaan magaalada Balad-xaawo iyo guud ahaan gobolka Gedo oo dhan waa kuwa aan aragnay ee waalid caayga ah, loona sheegay in ay la dagaallamayaan ciidamo Kenyan ah.
Tani waxay noqoneysaa ceeb usoo hoyatay ciidamada u dhaqanka eg Maleeshiyaadka ee uu Farmaajo kusii daabulayo gobolka Gedo, waxay sabab u noqdeen geerida dad shacab ah oo ku hoos noolaa maamul ka xigsada Al-Shabaab, waxaa loogu badalay in lagu garaaco Hoobiye -yaal, Qoys 7 qof ka koobnaa 5 caruura iyo labadii waalid ee dhalay ayaa ku baaba'ay, waxaana qabriga ku dul barooranaya Hooyadii dhashay caruurta la xasuuqay!